रोचक समाचार – Nepal24News
शास्त्र भन्छ : महिलाले गर्नै हुदैन यी ९ काम अनर्थ हुन्छ (जान्नुहोस् ति के के हुन् ) एउटा राम्रो आचरण भएकी महिलाले घरलाई स्वर्गजस्तै बनाउन सक्छिन् ।महिला घरकी लक्ष्मी हुन् । भनिन्छ एउटा त्यतिबेला घर जस्तो बन्छ जतिबेला त्यस घरमा बस्ने महिलाले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर त्यसको पालन गर्छन् । हरेक धर्ममा महिलाहरुको स्थान माथि राखिएको हुन्छ । साथै महिलाको लागि कति काम यस्तो बताइएको छ कि जुन उनीहरुलाई गर्न इन्कार गरिएको छ । घर छोडेर हिँड्नुहुँदैन शास्त्रको अनुसार स्त्रीहरु कुनै पनि हालतमा आफ्नो घर छोडेर हिड्नुहँदैन । अर्थात अर्काको घरमा बस्नुहुँदैन । यो कुरालाई नमान्दा धेरै नोक्सान हुन सक्ने बताइन्छ ।नेपाली संस्कृतीमा जनई लगाउने परम्परा बैदिक कालदेखिनै चलिआएको छ । पुरुषको लागि जनई लगाउनु अनिवार्य मानिएको छ तर महिलाले जनई लगाएमा नराम्रो हुने मान्यता रहँदै आएको छ । जप गर्नुहुँदैन ओम मन्
चैत्र ०५ गते सोमबार यी राशिको दिन सुभ छ र यी राशिको लागि निकै कठिन,धन प्राप्ति र समृद्दीको लागि यसो गर्नुहोस्
चैत्र ०५ गते सोमबार यी राशिको दिन सुभ छ र यी राशिको लागि निकै कठिन,धन प्राप्ति र समृद्दीको लागि यसो गर्नुहोस् मेष आर्थिक सङ्कटको निवारण हुनेछ । तर समय र नियमको अनुशासनलाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन । प्रतिस्पर्धी र शत्रु सक्रिय हुन सक्छन्, त्यसैले आँटेका÷ताकेका काममा गोपनीयता कायम राख्नुपर्छ । छरछिमेकमा देखिएका असमझदारी हटाउने प्रयास सार्थक हुनेछ । चिताएका काममा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् । टाढाका साथीभाइको निम्तो प्राप्त हुन सक्छ । आजका लागि शुभअङ्क ८ र शुभरङ्ग गाढा पहेंलो बुट्टे हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ कें केतवे नमः यस मन्त्रको कम्तीमा १९ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।(राशिफल मा जे जस्तो भनिए पनि नित्य कर्म लगन र परिश्रम गर्नुहोला अवस्य सफल भइने छ र आंशिक रुपमा यो राशिफल पनि प्राप्त हुनेछ ) बृष लगनशील बन्दा पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन
सुत्नुभन्दा पहिला भुलेर पनि नखानुहोस् यी ५ चिज,नत्र ज्यानै जान सक्छ
आजकल तौल बढ्नाले महिलाहरुको लागी मात्र नभएर पुरुषहरुका लागी पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । तौल बढ्नुमा सिधै हाम्रो जीवन शैली र गलत खानपान जिम्मेवार हुन्छ।केही खाने कुराहरु यस्ता हुन्छन् जुन रातको समयमा खानाले हाम्रो शरीरमा फ्याट जम्मा हुन्छ। आज हामी तपाईलाई यस्तो खानाको बारेमा बताउछौ जुन सुत्नुभन्दा अगाडी कहिल्यै खानु हुदैन। १. मैदा: मैदाले तौल बढाउन ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ। मैदामा अधिक मात्रामा क्यालोरी हुन्छ । त्यसैले सुत्ने बेलामा यसबाट बनेको चिज जस्तै पुरी, पराठा, पाउरोटी, बिस्कुट, पिज्जा आदि नखानुहोस्। यस प्रकारका चिज दिनमा खानुहोस् र भरपुर मात्रामा पानी पिउनुहोस्। यसले तपाइको स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउछ। २. मक्खन: तौल चाडै बढाउनको लागी मक्खन सिधै जिम्मेवार हुन्छ। त्यसैले मक्खन सुत्नुअघि नखानुहोस्। यसमा फ्याट धेरै हुन्छ, जुन रातमा सजिलैसंग पच्न पाउदैन र पेटमा गडबडी हुन्छ ।३. क्रिम:
३ महान वैज्ञानिकको जन्म र मृत्युको आश्चर्यजनक संयोग
एजेन्सी। यस वर्षको १४ मार्चका दिन महान वैज्ञानिक स्टेफल हकिङको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भयो । उनको जन्म र मृत्युमा निकै आश्चर्यजनक संयोग बनेको छ जसले धेरैलाई चकित पारिदिएको छ । १४ मार्चका दिन संसारका दुई महान वैज्ञानिकको जन्म र मृत्युको अनौठो संयोग जोडिएको छ । स्टेफन हकिङको मृत्यु भएकै दिन मार्च १४ मा महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनको जन्म भएको थियो । आइन्सटाइनको जन्म १४ मार्च १८७९ मा भएको थियो । यी दुई वैज्ञानिकको उमेरमा पनि अनौठो संयोग परेको छ । आइन्सटाइनको मृत्यु ७६ वर्षको उमेरमा भएकोमा हकिङको मृत्यु पनि ७६ वर्षकै उमेरमा भयो । यतिमात्र होइन यो संयोगमा अर्का महान वैज्ञानिक पनि जोडिएका छन् । महान वैज्ञानिक ग्यालिलियोको मृत्यु भएकै दिन हकिङको जन्म भएको थियो । ग्यालिलियोको मृत्यु ८ जनवरी १६४२ मा भएको थियो । यसको ठिक ३०० वर्षपछि ८ जनवरी १९४२ मा हकिङको जन्म भयो । हकिङको जन्म र मृत्युको मि
रेड बुल खाएर खुशी भएपछि युवतीको मृत्यु, पोष्टमार्टमको रिपोर्ट देख्दा चिकित्सक नै हैरान
कहिलकाहिँ खुसी पनि निकै महङ्गो पर्दछ । यस्तै भएको छ, मेक्सिकोकी १६ वर्षीय युवतीलाई । विदा मनाउन साथीहरुसँग एउटा समुन्द्री किनारामा पुगेकी लिनाको मृत्यु भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया एजेन्सीहरुले उल्लेख गरे अनुसार तत्काल के कति कारणले उनको मृत्यु भएको भन्ने कुरा थाहा नभएपनि पोष्टमार्टम गरिएपछिको कारण थाहा पाएपछि भने सबै चकित बनेका थिए । के थियो त कारण ? पोष्टमार्टमको रिपोर्ट देख्दा चिकित्सक नै हैरान भएका समाचारमा उल्लेख छ । पोष्टमार्टमको रिपोर्टमा मृत्युअघि लिना निकै खुशी भएको उल्लेख छ । अर्थात, खुसी बढी भएकै कारण उनको मृत्यु भएको चिकित्सकहरुले बताए ।घटनाको प्रहरीले जाँच शुरु गरेपछि उनका साथीहरुसँग सोधपुछ गरिएपछि केही अचम्मलाग्दो कुरा खुलेको थियो । उनका साथी र परिवारका सदस्यहरुका अनुसार, समुन्द्री किनारामा मस्ती गरिरहेको बेला लिनाले अचानक आफू औधी खुशी भएको बताएकी थिइन । “म न
२ सयपटक प्लास्टिक सर्जरी गराउँदा यस्तो भयो नितम्ब (फोटो सहित)
आकर्षक देखिनका लागि महिलाहरु केसम्म गर्दैनन् । जिम, योगा, डाइटिंग तथा प्लास्टिक सर्जरी आदि । तर कतिपयमा सुन्दर देखिने नशा यति धेरै हुन्छ कि उनीहरुलाई प्लास्टिक सर्जरी गराउने लत नै लागेको हुन्छ । यस्तै एउटा नाम हो, स्टार डेलगुडाइस । बेलायतको लिचफिल्डमा जन्मिएकी २८ वर्षकी डेलगुडाइसले अहिलेसम्म लाखौँ पाउण्ड रकम प्लास्टिक सर्जरीमा खर्च गरिसकेकी छन् । उनले पहिलोपटक १७ वर्षकी छँदा प्लास्टिक सर्जरी गराएकी थिइन् र अहिलेसम्म जिउका विभिन्न अंगको गरी २ सयपटक प्लास्टिक सर्जरी गराइसकेकी छन् ।हालै टेलिभिजनमा दिएको एक अन्तरवार्ताका क्रममा उनी पूरै समय उभिइन् । यसरी उभिनु उनको बाध्यता थियो । हालै उनले आफ्नो नितम्ब प्रत्यारोपण गराएकी छन् । जसका कारण उनको नितम्ब ठूलो भएको छ र बस्न पनि मुस्किल पर्दछ । आफ्नो प्लास्टिक सर्जरीको लतको मुख्य कारक उनी आफ्ना बाउआमालाई मान्छिन् । बाबुआमाले नै लगातार दबाव द
जहाँ महिलाको कुमारीत्व परीक्षण पछि मात्र सेना र प्रहरीमा भर्ना हुन् पाउँछन्
इन्डोनेसियामा उच्च शिक्षा पास गरेका १८ देखि २० वर्षका युवतीलाई सेना र प्रहरीमा भर्ना गर्नुअघि भर्जिनिटी टेस्ट अनिवार्य छ । ह्युमनराइट वाचले गरेको अध्ययनअनुसार यस्तो परीक्षण हवाई फोर्स, सेना र नौसेनामा भर्ना हुने अधिकृतलाई अनिवार्य छ ।स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवतीका लागि पनि परीक्षण अनिवार्य गरेका छन् । केही वर्षअघि जेम्बर, पूर्वी जाभालगायतका प्रान्तमा हाई स्कुलबाट स्नातक गर्नुअघि परीक्षण खारेज भए पनि लागू हुन सकेको छैन । कसरी हुन्छ परीक्षण ? दुई औँलाको परीक्षण दिएको सो अभ्यासमा चिकित्सकले महिलाको योनिच्छेद र त्यसको आकारको साथै योनीको शिथिलता अध्ययन गर्छन् । परीक्षणपछि युवतीले यौनसम्बन्ध राखे–नराखेको खुलासा हुने दाबी गरिएको छ । वासिङ्टन पोस्टका अनुसार सो परीक्षण सेनामा प्रवेश गर्ने महिलाका लागि पहिलो खुड्किलो हो । ‘सेनामा भर्ती हुन चाहने युवतीले नग्न भएर पर
मानिसको दिमागबाट कसरी निस्कन्छन् यस्ता जुक्ती ? हाँसो रोक्न नसकिने तस्विरहरु !
बेला–बेला सामाजिक सञ्जालमा केही यस्ता तस्विर भाइरल हुन्छन्, जसलाई देखेर हाँसो रोक्न कठिन हुन्छ । यस्तै केही तस्विर हामीले कलेक्शन गरेर देखाउँदैछांै । जुन देखेर तपाईलाई पनि हाँसो रोक्न गाह्रो हुनेछ । यी तस्विर समाजिक संञ्जालमा निकै भाइरल भएका थिए । हेर्नुहोस् तस्विर
तेजपत्ता पनि घरेलु औषधीले भरिपुर्ण गुण भएको पात हो । यसले माछा, मासुका परिकार स्वादिलो बनाउनको लागि प्रयोगमा ल्याइन्छ । तर यसको औषधीय गुणको बारेमा भने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । यसले स्वादको मात्र काम नगरेर अचुक औषधीको काम गर्छ । तेजपत्ताका फाइदा यस्ता छन् । सर्पको विष झार्छ : सर्पले टोक्ने वित्तिकैको आलो घाउलाई तत्काल निको पार्न तेजपत्ताले औषधिको काम गर्छ । विषालु किराले टोकेर बनेको घाउमा तेजपत्ताको रस प्रयोग गर्दा घाउ ठिक हुन्छ । सर्पले टोकेको ठाउँमा तेजपत्ताको रस लगाउँदा विष झर्छ । तेजपत्ताको तेलमा ‘एन्टी फंगल’ तथा ‘एन्टी ब्याक्टेरियल’ गुण हुन्छ, जसले छालाको इनफेक्सनबाट समेत बचाउँछ । जुम्रा मास्छ : टाउकोमा जुम्रा परेर दिक्क हुनेलाई तेजपत्ता वरदान बन्न सक्छ । पानीमा तेजपत्ता राखेर धेरै बेर उमाल्ने । यसरी उमालेको मनतातो पानीलाई कपालको जरामा लगाउने । तीन–चार घन्टा राखेपछि पानीले टाउको
मोटी केटीसँग बिहे गर्नुका फाइदै फाइदा! (हेर्नुहोस भिडियो)
अहिले त ट्रेन्ड नै चलिसकेको छ कि, पातलो ज्यान भएकी केटी मात्रै सुन्दर हुन्छिन् भन्ने । त्यसैले हरेक केटाको रोजाइमा पातलो ज्यान भएकी केटी नै पर्छिन् । तर आज हामी यस्तो सत्यताबारे बताउँदै छौ, जो जानेर तपाई अविवाहित हुनुहुन्छ भने मोटी केटीसँग विवाह गर्न मनाही गर्नुहुने छैन। मोटी केटीसँग विवाह गर्नुका धेरै फाइदा छन्। यसको पहिलो फाइदा हो, मोटी केटीसँग विवाह गरेपछि सपिङमा तपाईँको पैसा खर्च हुने छैन। किनभने मोटी केटीहरू कपडाका बारेमा धेरै सौखिन हुँदैनन्। अर्को फाइदा के भने मोटी केटीहरू पातलो ज्यान भएकी केटीको तुलनामा मनले धेरै सफा हुन्छन्। मोटी केटीको मनमा कसैप्रति घृणाभाव हुँदैन। साथै मोटी केटी आफ्नो ससुराली पक्षका व्यक्तिको धेरै ख्याल राख्छिन्। वैज्ञानिक खोजबाट पनि यो पत्ता लागेको छ कि, मोटी केटीसँग विवाह गर्ने केटाहरू जीवनमा धेरै खुसी हुन्छन्। यदि तपाई खानपिनमा सौखिन हुनुहुन्छ भने पनि